Ahoana ny fomba hahitana toerana famandrihana ankavia eto Italia | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana ny fomba hahitana toerana famandrihana ankavia eto Italia
(Last Nohavaozina: 12/06/2020)
Ciao! Ianao mieritreritra ny fitsidihana ny androm-piainany ny Italia! Izany dia ny toerana hahaterahan'ny ny renaissance ary ny tanàna efa fampanantenana ho elate sy aingam-panahy anareo noho ny asa tanana, maritrano, ary ny firaiketam-pitiavany amin'ny sakafo. Italia no tena an-trano ny gastronomy. Amin 'ny takelaka dia tsy hoe nanompo toy ny sakafo, izy ireo famoronana. Raha trandrahana ianao tafio-drivotra ity tanàna-mahagaga, Aiza no ahitanao havia entana toerana any Italia?
Mandeha aminy cobbled arabe, mihena ao amin'ny ambiansy filokana, mahatonga azy io lisitra amin'ny siny-toerana halehany. Ny hany zavatra mety hanimba ny olon-tiany dia voatery hamindra ny entana miaraka aminao, satria izay te mba hahavaky tratra na aiza na aiza alehanao? Malalaka sy falifaly ny fomba hivezivezena manerana an'i Italia ary manao izany dia azonao atao ny mampiasa toerana misy entana vita any Italia.
Train Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Taratasy fiaran-dalamby mora indrindra Tranonkala eto amin'izao tontolo izao.
Left entana Locations In Airports
Safidy azo antoka sy tsotra hitahirizana entana, amin'ny layover, dia amin'ny seranam-piaramanidina, na raha manana maimaim-poana isan'andro tsy misy trano fandraisam-bahiny. Tadidio fa ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe Hub dia mora izany safidy, fa kely trickier seranam-piaramanidina mety ho toy izany koa ny fikarohana eo anatrehanao mahazo ny voafidy seranam-piaramanidina. Tsara indrindra ny manadihady mialoha ny fotoana amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina mba hahitana toerana entana vita eto Italia.
Milan Malpensa Airport ny entana ankavia no misy eo amin'ny fari-Terminal Arrivals 1. Izany dia misokatra isan'andro avy 6 AM 10 PM. vola mitovy, ho zavatra kely, Te ianao mandoa ny € 3.50, ho an'ny entana lehibe kokoa eo amin'ny € 4 sy tsirairay ho an'ny 24 ora.
Rome Fiumicino ny Airport ankavia entana eo ambany rihana ny Terminal 3. Izany dia misokatra isan'andro avy 6:30 AM 11:30 PM sy hitentina momba € 6 isaky ny zavatra ho an'ny fe-potoana 24-ora.
Venice Marco Polo Airport ny entana ankavia birao eo amin'ny ambany rihana, ao amin'ny seranam-piaramanidina alalan'ny terminal amin'ny fidirana 1. Misokatra isan'andro izy ireo 5 ny 10 PM, fa ny fotoana dia mety tsy hitovy amin'ny ririnina.
Fiaran-dalamby izay ahafahanao mitahiry harona ankavia
Fiantsonana any Roma
Roma dia manana lehibe telo gara, Ostiense, Roma Termini, sy Roma Tiburtina. Voafidy tokoa ianao rehefa misafidy ireo mpamatsy amin'ny toerana fitehirizana toerana misy ny entana any Italia.
Raha toa ianao ka mandalo amin'ny lamasinina ho an'ny andro, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, ny sasany tena fanompoana.
Afaka manantena ny karama eo € 10 sy 15 € isan'andro, amin'ny eo ho eo. Toy ny lafiny kely naoty, gara tsara koa amin'ny tahiry amin'ny sakafo sy ny rano mandritra ny andro, nanofa bisikileta sy ny mpitan-bola.
Fiantsonana any Milan
Ny lamasinina no lalana mety indrindra hialana ao Eropa sy any Milan, misy fiaran-dalamby efatra, Milano Lambrate, Milan Rogoredo, Milano Centrale sy Milan Porta Garibaldi.
Araka ny voalazanay teo aloha, tsy misy tsy fahampiana ny mpanome tolotra satria lehibe mila rehefa eo ny hetsika.
Ny fotoana fitehirizana sy ny fotoana fitahirizana faran'izay lehibe any an-toerana any Italia dia miovaova ho an'ny toeram-piantsonan-javatra samihafa ary mandoa € 10 ka hatramin'ny 15 € isan'andro. Mety ihany koa ho famerana lanjany, Amin'ny tranga sasany dia aleo antoka hisavana indroa.
Fiantsonana any Venise
Venezia Santa Lucia no foiben'ny fiaran-dalamben'i Venice ary manana safidy maro amin'ireo toerana malasy sisa any Italia. Toy izany koa ho Milan sy Roma, Tolotra Venice vidiny entana mitentina tavela sisa.
Ny sasany dia hanana fahasamihafana sy ny lanjany izay azo atao ny fahasamihafana. Self-service fisoloana akanjo fivarotana ireo conveniently nametraka manerana Venice.
Toerana fanamboarana havia Manodidina ny Tanàna In trano
Ny seranan-tsambo ny antso voalohany ho ny trano fandraisam-bahiny, akanin'ny tanora, na Airbnb ho an'ny toerana an-kavia. Rehefa avy avy amin'ny teny anglisy, aza matahotra ny hangataka satria maro ny orinasa dia hitandrina ny havia entana maimaim-poana. Ny matetika ho iray ihany fe-potoana mba ho azo antoka ny hahazoana ireo antsipirihany manan-danja.
Nanontany tamin'ny anoloan'ny latabatra momba ny safidy ho an'ny safes sy ny fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana. Leave a kely tendrony raha manome ny entana ny mpiandry vavahady.
Fanamboarana ankavia Private Services
Stow ny Bags
Izany no malaza safidy Eoropeana ary manana kintana malaza. Isika dia nifantoka tamin'ny Italia, ary izy ireo sampana tany Roma, Milan, Florence, Naples, Pisa, Catania, sy Bari, fanaovana antoka mba handrakotra Italia rehetra sy ny tanàna malaza. Self-service dia safidy lehibe.
Aza tsipika sy manararaotra ny 24-ora, ary tena zava-dehibe ny fanaraha-maso, ny kitapoko azo antoka hatramin'ny € 300.
Entana Storage Offices
Izany dia ankavia entana safidy manokana ho Venice.
Ho hitanao ao amin'ny efitrano fahatongavan'i Venice Marco Polo Airport izy ireo, ny Venise Santa Lucia Railway Station, ny Roma Piazzale, ary ny fantsakan-tsambo Venice. Fetsy Efa napetraka ao amin'ny sehatry ny fitaterana. Izany no mahatonga azy ny tsara indrindra safidy handao ka handeha.
Rehefa mandeha any Italia, ary mila ankavia entana tianao, Tena ilaina ny manamarina mialoha araka ny ny faritany haleha izy. Check fotoana, jereo ny fameperana lanjany, ary jereo ny vidiny, ho vonona! tena zava-dehibe, tia Italia, entana maimaim-poana.
Mifikitra amin'ny Save A Train hahitana ireo safidy tsara indrindra azo atao amin'ny tapakila azo amidy amin'ny vidiny mora indrindra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Toerana misy làlana ankavia eto Italia sy ny fomba hahitana azy ireo” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny nl amin'ny fr na tr sy ny fiteny maro hafa nofidinao.
europetravel eurotrip leftluggage longtrainjourneys valizy Train Travel travelitaly